मौसमको तरकारी खाए विषादीबाट जोगिन सकिन्छ - अर्थतन्त्र - नारी
मदनकुमार राई / कृषि विशेषज्ञ
अहिले बजारमा पाइने तरकारीमा विषादीको मात्रा कस्तो छ ?
अहिले अधिकांश तरकारी तथा फलफूल भारतबाट भित्रिएको पाइन्छ । भारतबाट आयात गरिएका अधिकांश तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमै उत्पादन हुने तरकारीमा पनि विषादी पाइन्छ । बेमौसमको तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी हुन्छ ।
यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ ?
विषादी भनेकै विष हो । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । विषादीयुक्त तरकारी खानु भनेकै विष खानु हो । यसको असर हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगमा पर्छ । अहिले तरकारीबाटै रोग सुरु हुने अवस्था आइसकेको छ ।
यस्तो तरकारी खानबाट जोगिन के गर्नुपर्ला ?
कतिपय घरमा तरकारी लगाउने ठाउँ छैन, कहाँ उत्पादन गर्ने त ?
अहिले सबैले भन्छन्–ठाउँ नै छैन कहाँ उत्पादन गर्ने ? यो भनेको ज्ञानको अभाव हो । ठाउँ छैन भन्दैमा उत्पादन नै हुँदैन भन्ने होइन । घरको कौसीमा पनि तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिले कौसी खेतीप्रति मानिसहरूको रुचि बढ्दै गएको छ । घरका भित्ताहरूमा तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसका लागि भाँडा माझेको वा लुगा धोएको पानी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उपभोक्ताहरूलाई विषादीमुक्त तरकारी एवं फलफूल ख्वाउन सरकारी तहबाट बस्तो कदम चाल्नुपर्ला ?
सरकारी तहबाट यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइँदा उपभोक्ताहरू विषादी खान बाध्य भएका छन् । प्रमुख समस्या भनेकै ज्ञानको अभाव हो । सरकारी तहमा बस्नेहरू नै यो विषयमा जानकार छैनन् । नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू यो विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
कार्तिक २८, २०७६ - डिप्रेसन रोकथाम गर्न सकिन्छ
सेयरमा महिला आकर्षण आश्विन ८, २०७८